Wholesale Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG fekitari uye vagadziri | Gaoqiang
Polycarboxylate Eteri Monomer HPEG / TPEG
Polycarboxylate ether yakakwira-renji mvura inodzora ndiyo yechitatu chizvarwa superplasticizer yakavakirwa pane calcium lignosulphonate uye naphthalene sulfonate. SUNBO PC-1030 ipfu yemahara inoyerera, pfapfaidzo-yakaomeswa inovandudzwa nehumwe hupfu hwekupfekita tekinoroji yakaoma.
Zita: isopentenyl polyoxyethylene ether
Sub fomula: CH = C (CH) CHCHO (CHCHO) nH
Kirasi: nonionic surfactant
Zita: methallyl polyoxyethylene ether
Molecular fomula: C = C (CH) C H O (CHCHO) nH
Zviratidzo zvemuviri nemakemikari
PH (5% mhinduro yemvura)
WDC / KLH-20
Kukosha kweHydroxyl, mgKOH / g
PEG zvemukati (%)
Kaviri chisungo chengetedzo chiyero (%)
Kuita uye Kushanda:
1. Ichi chigadzirwa hachina chepfu, hachitsamwisi, chine kusimba kwemvura kwakanaka, chinonyungudika mumvura uye zvakasiyana siyana zvinogadziriswa manyowa, uye chinhu chakakosha mbishi kuchizvarwa chitsva cheyakanyanya-inoshanda michina yeglue.
2. Iyo molecular kurema kugoverwa kwechigadzirwa ichi chakamanikana, zvirimo zve polyethylene glycol yakaderera, chiyero chekuchengetedza chemaviri zvisungo chakakwirira, uye iyo polymerization chiitiko chagadziriswa zvakanyanya. Chiyero chekushandura kwechigadzirwa chakakwirira. Kuita kwakazara kwemumiriri kwakanakisa. \_
3. Iyo inodzikisira mvura mumiririri inogadzirwa neichi chigadzirwa ine yakanyanya-kugona tunhu inopararira uye chengetedzo kugona, uye ine yakanaka yekupararira mhedzisiro pane akawanda hupfu zvinhu zvakadai sesamende. Iyo ine yakakwira yekudzora-mvura chiyero uye yakaderera simende kushandiswa. Hunhu hwesamende hwakawedzerwa ndi0.2% -0.5% Konkrete yekudzora mvura, mwero wekuderedza mvura unogona kusvika kupfuura 30%.
4. Mushure mekuwedzera inodzikisira mvura mumiririri kukongiri, firimu rekushambadzira rinogadzirwa pamusoro pecement particles, iyo inodzora hydrate chiyero chesamende, inoita kuti kukura kwesimende ibwe rekristaro rive rakakwana, kunoderedza capillary void yemvura kubuda kwemvura, uye dhizaini sisitimu yakanyanya kuomarara, iyo inogona kugadzirisa kongiri Iko kusimba kuri kupfuura 20%. Iyo inogona kuiswa kune yakakwira-simba (pamusoro peC60) yekutengesa kongiri.
5. Iyo yekudzora-mvura mumiririri inogadzirwa neichi chigadzirwa inogona kuvandudza zvakanyanya rheology uye plastikiity yekongiri. Inogona kuwana kuvakwa kwekongiri nenzira yekuyerera-kwayo, kupomba, uye pasina vibration, iyo inogona kuwedzera kumhanya kwekuvaka uye kudzikisa mutengo wekuvaka.
6. Ichi chigadzirwa chigadzirwa chakasvibirira uye chakasununguka, chloride ion yezvinhu: content0.1%. Kuteerera ne ISO14001 epasi rese kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwenzvimbo.
1. Ichi chigadzirwa chine yakanaka mvura solubility.
2. Ichi chigadzirwa chinoshandisa chinonyanya kushanda chinogadzirisa uye yakakosha synthesis maitiro. Iyo molecular uremu kugoverwa yakatetepa, iyo ethylene glycol yemukati yakaderera, uye yakapetwa kaviri bond chengetedzo mwero wakakwira. Iyo polymerization chiitiko chagadziriswa kwazvo, chiyero chekushandura chigadzirwa chakakwirira, iyo polycarboxylic acid yekudzora mvura chigadzirwa chakagadzirwa nechigadzirwa chine zvemukati zvinoshanda, uye iyo yekudzora yemvura ine yakanakisa yakazara kuita.
3. Performance uye mhando index yeyakagadzirwa mvura yekudzora:
1) Kudhura kwemitengo. Muchiitiko chekuzadzisa chiyero chakaenzana chekudzikisa mvura, ine mutengo wakakwira kuita.
2) Low kusanganisa uye yakakwira yekuderedza mvura chiyero. Iyo inodzikisira-mvura mumiririri amai doro rine yakasimba zvemukati makumi maviri% uye iyo yekudzora-mvura chiyero che1.0% (huwandu hwesimbi yezvinhu) inogona kusvika 30-35%.
3) Kunaka kwepurasitiki. Iko kurasika kwekurasika kwekongiri mushure me1h idiki.
4) Kunaka kugadzikana. Inogona kudzikisa zvakanyanya kushandiswa kwemvura uye nekuvandudza kusimba kwekongiri.
5) Green uye zvakatipoteredza kuchengetedzwa. Mukugadzirwa kwekudzora kwemvura, hapana formaldehyde uye chloride ion inokuvadza kune zvakatipoteredza zvinoshandiswa, uye zvirimo zvesulphate zvakaderera.
chidimbu chakasimba i25KG / bhegi;
60% zvemukati zvemvura mumiririri: 1000 kg / dhiramu, hombe mvura, mudziyo wemvura bhegi
Kutakura uye Kuchengetedza:
Ichi chigadzirwa hachina-chepfu, chisina hunhu, chisingatsve, chakazara chemakemikari kuchengetedza uye kutakura. Chengetera mune inotonhorera, yakaoma uye mweya wedura.
gore rimwe (rakachengetedzwa chengetedzo pakamuri tembiricha)
Pashure: Sodium Gluconate
Zvadaro: JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (Yakakwira Yekuderedza mhando)